Fanahy Kalifornia iray - Mivoa-dra ny foko - Manisa ny fanjakana
Tamin'ny 6 septambra 2020, io fanahy Kalifornia io dia "nahita" ny isa 332 avy amin'ny Boky manga, hafatra nomena am-boalohany Fr. Stefano Gobbi tamin'ny 6 septambra 1986 tamin'ny tsingerintaona nahaterahan'ilay “fahagagan'ny ranomaso”:
Ra ny foko
Izaho no Reninao malahelo indrindra. Androany indray, mandatsaka ranomaso be avy amin'ny masoko feno famindram-po aho. Tian'izy ireo hampahafantatra anao ny halehiben'ny alahelo ateraky ny fon'ny Immaculate ny reninao any an-danitra. Ra ny foko. Ny foko dia mifindra amin'ny ratra lalina. Tototry ny ranomasom-pahoriana ny foko. Miaina tsy mahatsiaro ny anjara miandry anao ianao. Mandany ny andronao amin'ny toetran'ny tsy fahalalana ianao, ny tsy firaharahianao ary ny tsy finoana tanteraka. Ahoana no ahatanterahana izany raha izaho, amin'ny lafiny maro sy amin'ny famantarana tsy manam-paharoa, dia nampitandrina anao ny amin'ny loza hanjo anao ary efa nilaza mialoha anao momba ny fitsapana mihosin-dra izay efa akaiky hitranga?
Satria io zanak'olombelona io dia tsy nanaiky ny antso nataoko hiverenana, ny fibebahana ary ny hiverina amin'Andriamanitra, dia saika hianjera aminy ny famaizana lehibe indrindra izay efa fantatry ny tantaran'ny zanak'olombelona. Sazy lehibe noho ny tondra-drano io. Hianjera avy any an-danitra ny afo ary ho ringana ny ampahany lehibe amin'ny zanak'olombelona.
Ny fiangonan'i Jesosy dia maratra amin'ny areti-mandringana amin'ny tsy fivadihana sy ny fivadiham-pinoana. Raha ny fisehoana azy dia milamina hatrany ny zava-drehetra ary toa mandeha tsara daholo. Raha ny tena izy dia tratry ny tsy fananan'ny finoana tsy mitsaha-mitombo izay manaparitaka ny fivadiham-pinoana lehibe hatraiza hatraiza. Eveka, Pretra, Mpivavaka ary mahatoky maro no tsy mino intsony ary efa very ny finoana marina an'i Jesosy sy ny Evanjely. Noho io antony io dia tsy maintsy diovina ny fiangonana, amin'ny fanenjehana sy ny rà.
Niditra koa ny tsy fitoviana, ny fisaratsarahana, ny ady ary ny fifandrafiana ao am-piangonana. Ny herin'ny tsy finoana an'Andriamanitra sy ny Masonry, izay niditra an-tsokosoko tao anatiny, dia eo am-pamotehana ny firaisankina anatiny sy ny manamaizina ny famirapiratan'ny fahamasinany. Izao no fotoana, nolazaiko mialoha, fa hanohitra ny kardinaly ny kardinaly, ny eveka hanohitra ny eveka ary ny pretra hiady amin'ny pretra ary ny andian'ondrin'i Kristy dia hoviravirain'ny amboadia masiaka, izay niditra teo ambanin'ny fitafian'ireo tsy manan-kialofana. ary zanak'ondry malemy fanahy. Ao amin'izy ireo dia misy aza ny sasany izay mitana andraikitra lehibe ary, amin'ny alalàn'izy ireo, dia nahomby tamin'ny fidirana sy tamin'ny fiasa teo an-tampon'ny Fiangonana i satana. Eveka sy Pretra ao amin'ny fiangonam-piangonan'Andriamanitra, lehibe tokoa ny andraikitrareo anio! Ny Tompo dia eo am-pitakiana aminao ny amin'ny fomba nitantanananao ny tanimboalobony. Mibebaha, mangata-pamelana, manonitra ary, ambonin'izany rehetra izany, mahatoky indray amin'ny andraikitra nankinina taminao.
Mihombo hatrany ny ota, tsy ekena ho ratsy intsony, tadiavina, sitrany ary tsy ekena intsony. Ny fahalotoana sy ny fijejojejoana dia manarona ireo trano naorin'ny fikomiananao. Izany no antony mampivoa-dra ny Foko - noho ny tsy finoana an-kitsirano sy ny hamafin'ny fonareo. Ra ny foko mahita anao mihidy ary tsy miraharaha ny fananarako alahelo reny. Latsaka ny foko satria hitako fa mihosin-drà izao ny lalanao, raha mbola tsy mahatsiaro tena mafy ianao miandry izay miandry anao.
← Andinin-tsoratra masina - Raha tsy manana fitiavana aho
Luz de Maria -Ny fanamasinana… →